Goatemalà : Loharanonà Aingam-panahy Tamin’ilay Printsy Kely Ve i Antigoà ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2018 16:14 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Deutsch, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Magyar, English
Sarin'ilay hazo Ceiba avy ao Suttonhoo, nampiasàna lisansa Creative Commons ny fampiasana azy
Ny tontolo tsara voatry ny firenena kely iray tahaka ny ao Goatemalà no isan'ny mampifoha ny famoronana. Ny fisian'ireo volkano 37 isa mivoaka avy ao ambanin'ny tany mandalo amin'ilay farihy malaza Atitlan, nahasarika mpanoratra maro io firenena io, babon'io toerana majika io. Mpitsidika toa an-dry Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Pablo Neruda, Che Guevara ary na i Aldous Huxley koa aza dia nitoetra tao amin'io firenenan'ny hazo kapaoka sy raozy io. Mpanoratra hafa iray koa, Antoine de Saint-Exupéry , fantatra kokoa tamin'ny fanoratany ilay Le Petit Prince (Ilay Printsy Kely), mba nandalo tao Goatemalà tsy nahy, izay no mahatonga antsika hametraka izao fanontaniana manaraka izao: Ny tanànan'i Antigoà ao Goatemalà ve no loharanon'ny aingam-panahy tamin'ilay Astéroida B-612 ?
Bonjour Guate [amin'ny teny espaniola], blaogy iray natokana ho an'ny vondrom-piarahamonina frantsay, no mitantara amintsika ny fiantombohan'io tantara io.
Antoine de Saint-Exupéry conoció Guatemala por accidente. Uno que destruyó su avión y lo dejó malherido.Antoine de Saint-Exupéry conoció Guatemala por accidente.
Nitoetra tao Goatemalà tsy nahy i Antoine de Saint-Exupéry taorian'ny nianjeràn'ny fiaramanidiny sy namparatra mafy azy.
Hoy ny Bonjour Guate nanohy :
Betsaka ny teoria momba ireo toerana niaingan'ny aingam-panahin'i Saint-Exupéry Ilay Printsy Kely. Ny iray amin'izy ireo no maminavina fa i Antigoà no Asteroida B-612, planetan'ilay printsy kely, izay toerana nakàny aina taorian'ilay lozam-piaramanidina nahazo azy.
Enchiel, blaogera goatemalteka mpitia ny Ilay Printsy Kely, no nandalina ireo teoria nahatonga an'i Antigoà, tananàn'ny raozy, ho aingam-panahin'ilay mpanoratra [amin'ny teny Espaniola]
Mety ho tombatombana fotsiny ve io? Iza no mahalala ? Ny azo antoka aloha dia ny hoe misy hifandraisany amin'ny Antigoà ny sasantsasany amin'ny fanoritsoritana ilay Asteroida , ohatra ny filazàna fa misy volkano roa matory ao amin'ilay Asteroida ary iray mbola miasa. Faritra aiza no notsidihan'i Saint-Exupéry, raha tsy ny tao Antigoà, izay ahitàna volkano roa matory (volkanon'i Agua sy Acatenango) ary volkano iray mbola miasa (ny volkanon'i Fuego) ?
Manana teoria iray hafa ilay blaogera Jorge Palmieri. Ny taona 1972, nihaona tamin'ny vady navelan'i Saint Exupéry izy, ilay Salvadaoriana Consuelo Suncin, izay nanamarina fa izy no ilay raozy be hambo tao amin’ Ilay Printsy Kely :
Vehivavy jejojejo izay i Consuelo ary tena tsara fanahy amin'ireo olona miaraka aminy. Na izany aza anefa, na eo aza ny kilemany amin'ny maha-olombelona azy, tsy misy afaka ny handà hoe tsy izy ilay aingam-panahin'ny mpanoratra ny ‘Ilay Printsy Kely’. Ny mpankafy azy kosa manohana ilay hevitra milaza fa pimaso ho an'i Salvadaoro, toerana niaviany ilay volkano ao amin'ilay Asteroida kely. Angamba izy naka aingam-panahy avy amin'ilay volkano efa maty Izalco (Any Salvadaoro) ho an'ilay Asteroida B-612, ilay planeta ipetrahan'ilay printsy kely sy ikarakarany tsara ilay raozy.
Io angamba no mety ho teoria marina indrindra, satria indray andro nanambara i Saint-Exupéry hoe :« Mbola tadidiko foana ireo mason'ny vadiko. Tsy hahita zavatra hafa toy ireny maso ireny intsony aho. Mandinika lalina0 izy ireo. ».
Bilaogera goatemalteka iray monina sy miasa ao Afrika, Desde Kinshasha [amin'ny teny Espaniola] no mitantara tantara fohy iray momba ny Baobab, ilay hazo malaza ao anatin'ilay boky, izay manam-pitoviana hafahafa amin'ny hazo kapaoka, hazo nasionalin'i Goatemala. Teny an-dalana hody, nalahelo mafy i Consuelo tsy mba nahita baobab kanefa nony farany, nahita iray ihany izy :
Nijery ankavanana aho avy eo ankavia ka dia nahita be dia be. Amin'izao faran'ny volana May aty Kinshasa izao, vao tonga saina aho fa hay efa teo foana ireo baobab ireo, ary hay hazo kapaoka ihany ry zareo, ary raha ny marina, tsy lavitra ny tranoko aho.
Nahita ny volkanontsika izy, nanimbolo ny raozintsika ary niaraka niaina tamin'ny mponina teto amintsika talohan'ny nanoratany ilay asan-tanany i Antoine de Saint-Exupéry, ilay frantsay mpanoratra malaza nanoratra ny ‘Ilay Printsy Kely’, ilay nilaza indray andro hoe : “Ny fo ihany no ahafahana mijery tsara; tsy hitan'ny maso ny tena tsy azo avela (ventiny) ». Nanavatsava ny lalamben'i Antigoà izy, naka vady vehivavy avy ao Amerika afovoany ary dia nandany ny fotoanany tamin'ny fanaovana sary nandritra ny fotoana naharariany. Avy eo nankany Amerika tamin'ny loha feno aingam-panahy. Ka na avy ao Goatemalà na tsia no niavian'ny aingam-panahiny, tsara fiafara ireo tranga sasany sy fihaonana kisendrasendra taminà olona tsy fantany, tahaka ity boky tazoniko eto an-tanako ity.